Imidlalo ekumgangatho we-10 njengokungqubana kwamaqela kuyo yonke into eyakha umhlaba, imikhosi eyalela abathanda abadlali abaninzi!
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Imidlalo ekumgangatho we-10 efana nokuNgqubana kwamaKhaya kuyo yonke into eniyakhayo emhlabeni, imikhosi eyalela abathanda abantu abaninzi!
Ukungqubana kwezindlu zezinye zezona zihloko zaziwayo kwimbali yokudlala, kwaye yenye yezona zinto zidweliswe apho. Ke ukuba ufuna ukuthatha ikhefu kumdlalo oqhelekileyo, kodwa ube namava omdlalo ofanayo kunye nemiceli mngeni, umiswe kakuhle ngeendlela ezizezinye zokuzama. Apha, siqokelele ishumi lezona zintle ze-COC-yabadlali bakho abaninzi, ulwakhiwo lwehlabathi, iqhinga lokulwa nokonwaba. Ziphathe kakuhle!
Ukungqubana kwenqaba: Ubudala bamaNqaku
Ngabadlali abangaphezu kwezigidi ezili-100 kwihlabathi liphela, iCastle Clash iphakathi kwezihloko ezimiselwe ngcono kudidi. Ukuxuba iqhinga elikhawulezayo kunye nokulwa, umdlalo ukuvumela ukuba wakhe inqaba, uqeshe imikhosi yamagorha anamandla, kwaye ukhokele umkhosi wezilwanyana zasentsomini kwindlela yakho yokuba yi-Warlord enkulu yehlabathi. Unokusebenzisana nabahlobo bakho ngokuchasene nabaphathi kunye nabanye abadlali, ukujoyina imilo kunye nokuphumelela iiDungeons zeQela.
Khuphela i I-Android okanye ios / Tyelela iwebhusayithi esemthethweni
Ukungqubana kweeNkosi 2
Ukungqubana kweenkosi 2 lelinye iqhinga lomdlalo kunye nokuhlaziya okuthile kuhlobo oluqhelekileyo. Ivumela abadlali ukuba bagaye ngaphezulu kwamaQhawe ama-40 kunye neqela labo lamajoni njengoko besakha iinqaba zokubuyisa uhlaselo. Zilithoba iindlela ze-PvE kunye ne-PvP, ke wonke umntu unokufumana indlela ayithandayo yokuNgqubana. Kukho & apos; s inkqubo eyomeleleyo yeGuild evumela idabi elinye ecaleni okanye ngokuchasene namahlakani abo!
Yenziwe nguGameloft, uSiegefall ngumdlalo weqhinga apho udlala khona umakhi, iqhinga lobuchule kunye nokumkani kwangoko. Abadlali banokujongana ngeziqu zabo kumadabi aphilayo e-PvP, bakhethe amacebo abo okanye bathathe izigqibo kubhabho. Uyakwazi ukutshabalalisa isiXeko esingavumelekanga njengeqela kwi-co-op Clan Raids, ungqubane ecaleni kweqela lakho kwaye utshabalalise iinqaba zezindlu zotshaba. Kukho kunye ne-apos; s into yokulwa nekhadi, apho uzisa inamba yomlingo okanye umoya oyingcwele emfazweni, kwaye uphilise umkhosi wakho ngomgangatho wamakhadi omlingo.
Imfazwe iyonke: uBukumkani
Kulo menzi wobukumkani, uya kuwubumba umhlaba ngokudala imilambo, amachibi, kunye neentaba. Emva koko niya kwakha iidolophu ezinabileyo kwaye niqeqeshe imikhosi eyoyikekayo ukoyisa imimandla emitsha, wandise ubukumkani benu, kwaye nisoyise abachasi. Kuyafaneleka ukubonisa ukuba lo mdlalo unqamlezayo, okuthetha ukuba ungadlala kuso nasiphi na isixhobo onaso kwaye yonke into eyenzekileyo ebukumkanini bakho iya kuqhubeka.
Ubukumkani bonke beMfazwe yoBukumkani
IiViking: Imfazwe yezizwe
Ngaphakathi kwihlabathi elingenanceba le-vikings, yinkululeko, amandla, uloyiko nobundlobongela obongamileyo. Khokela amajoni akhaliphileyo emfazweni kwaye oyise ilizwe elitsha, ukubonisa ukuba umkhosi wakho womelele kwaye unamandla ngaphezu kwabanye abadlali. IiVikings ziyaphawuleka kwimizobo yayo entle kwaye inebali elinyanzelisayo kunye neemfazwe ezinamandla ngaphezulu koko. Kukho uluhlu olubanzi lwamajoni, anje ngeemenenja, abakhweli bamahashe, oomatshini bokulwa, kunye neearcheresses abanokukhetha phakathi kwazo. Ukugqitywa kwemibuzo kunye nemisebenzi yeminatha emihle kunye nempumelelo, ngelixa izixhobo kunye nezixhobo zokwenza izixhobo zinika umkhosi wakho umda ongazange ubonwe ngaphambili.
Imfazwe yeeVikings yeeNkcubeko
Ukutshintshela kwi-iOS? Nazi ezinye iingcebiso kunye namaqhinga onokuthi ungazi ngawo
Uvavanyo lweSamsung yeRugby Pro